Imerintsiatosika : nijery ifotony ny olan’ny tantsaha i Neny – MyDago.com aime Madagascar
Imerintsiatosika : nijery ifotony ny olan’ny tantsaha i Neny
Nandeha niantsena tany Imerintsiatosika i Neny omaly. Amin’ny maha renim-pianankaviana azy dia nijery izay ilaina sy mahasoa ny ao antokan-trano izy. Nividy trondro, voasary, anana, sns…Nitafa sy nitakosona tamin’ny tantsaha ihany koa izy ary nifanakalo hevitra tamin’izy ireo. Olana goavana mianjady amin’ny tantsaha ny tsy fandriam-pahalemana izay mahazo vahana ankehitriny : « tamin’ity fitondrana ity vao natory any an-tsaha izahay » hoy ny renim-pianankaviana iray nitaraina. Olana goavana mahazo ny tantsaha ihany koa ny tsy fahampian’ny zezika enti-miasa, ny faharatsian’ny masom-boly , ny olana eo amin’ny fananan-tany sns…Tsy navelan’ireto vahoaka tonga teny an-tsena raha tsy nitafa i Neny. Tamin’ny fandraisam-pitenenana nataony no nanamafisany ny tokony hahamafy horina ny firaisan-kina,ny fifankatiavana,fifamelana. Raha tiana hahomby ny zavatra atao dia mila mahay miara-miasa isika hoy izy. Nampahatsiahiviny teto ihany koa ny lanjan’ny fifamelana sy ny fifankatiavana eo amin’ny mpiara-belona.
Tohodranon’i Dabara – Menabe : nijery ifotony ny olana i Neny
6 réflexions sur « Imerintsiatosika : nijery ifotony ny olan’ny tantsaha i Neny »
Nnnndryyyyyy misaotra neny a!!! ravoravo ery Tsega zany , hitako eto mihintsy.
Tiako be izany fihetsika TSOTRA tsy VIDINA tsy MISY FISARIHANA fa dia mandeha ho azy.
Tsy takatrin’ny LOHAKELIN’ i foza mihintsy izao hetsika SOA TOAVINA IZAO.
11 juillet 2013 à 15 h 51 min
Hafa ihany i Neny , ary ikala Mialy mpivarom-poza mba ahoana @ zao e , maninona no tsy mba mitety faritra dia hita eo e !
Efa voalazanao fa varina mivar-poza hividianana io fifidianana io.
Tsy maintsy mandresy ny marina !homba antsika Andriamanitra!!!
rama! I mialy anie tsy mifangaro raha tsy amin’ny vazaha e! »j’évite les mavomavo gaches ».je suis la première dame hein…
11 juillet 2013 à 16 h 51 min
Valim-panontaniana ho an’i rama !
Efa tsy azo afenina amin’ny ranomanitra intsony ny fofom-poza eny aminy ! Midofaka loatra ny fofon-trondro-maina ! Nihaoka i Mam..y ! Safotra izay manakaiky azy !
Dia mankahery hatr@ farany. Fa aza hadino ry Malagasy fa raha tsy hidiana an-dalambe isika dia tsy hisy olona hafa hanao izany eo @ toerantsika. indrindra @ izao fahatogavan’ny GIC-M izao. Nidina teny an-dalana ny V.O.T tsy nanampy ny ankolafy Ravalomanana. Inona no antony ? tsy tokony atao ve ny midina an-dalambe izao ? Dia tsy aseho @ ireo firaisambe iraisam-pirenena ireomihitsy ny hevitry ny vahoaka fa ireo mpitarika irery ihany no milaza izay tiany hambara. Tsy ampy ny tolona. Ny fivavahabna lavabe, fa tsy misy kosa ny asa manaraka izany. Miala tsiny @ izay tafitohina fa ny havendranantsika ihany no antony iray mampiletika izao krizy izao.
Précédent Article précédent : ANTOKO ZANAK’I DADA : Nijoro ara-dalàna
Suivant Article suivant : DECLARATION DE LA MOUVANCE RAVALOMANANA